राष्ट्रिय योजना आयोगको उपाध्यक्षमा विश्व पौडेल – Gaule Media ::
Home/समाचार/राष्ट्रिय योजना आयोगको उपाध्यक्षमा विश्व पौडेल
Gaule media१२ श्रावण २०७८, मंगलवार १८:०६
१२ साउन, काठमाडौं । सरकारले राष्ट्रिय योजना आयोगको उपाध्यक्षमा डा. विश्वनाथ पौडेललाई नियुक्त गरेको छ । पौडेल युवा अर्थविद्का रुपमा चर्चित छन् । ​मंगलबार बालुवाटारमा बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले पौडेललाई राष्ट्रिय योजना आयोगको उपाध्यक्षमा नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको हो ।
यसअघि केपी ओली सरकारका पालामा नियुक्त भएका डा. पुष्प कँडेलले राजीनामा दिएपछि रिक्त रहेको पदमा सरकारले पौडेललाई ल्याएको हो । त्यस्तै, योजना आयोगका सदस्यहरूमा रामकुमार फुँयाल र दिलबहादुर गुरुङलाई नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको छ ।
७ चैत्र २०७६, शुक्रबार ०१:२८
स्थानीय तहका भ्रष्टाचारसम्बन्धी उजुरी बढी पर्न थाल्यो : प्रमुख आयुक्त
१७ कार्तिक २०७५, शनिबार १३:२१
सरकारका प्रवक्ता भन्छन्– जोखिम हेरेर मात्र लकडाउनबारे निर्णय गर्छौँ : सरकारका प्रवक्ता
११ बैशाख २०७७, बिहीबार १३:२४
रोट्याक्ट लेखनाथले सप्ताहव्यापी कार्यक्रम गर्ने
२६ फाल्गुन २०७५, आईतवार १३:००